“Buurmadow Boqornimadiisu waa naanays oo kale, waxaanu boqor u yahay warbaahinta oo qudha” | Somaliland.Org
August 28, 2011	Hargeysa(Somaliland.Org) – Wasiirkii Hore ee Warshaddaha Somaliland Eng. Axmed Cali Ubaxle ayaa sheegay in dadka Ajanabiga ah ee dalka maalin walba sida sharci darada ah u soo galayaa ay keeni karaan khatar wayn oo aan laga soo waaqsan Karin, waxaanu xukuumadda ugu baaqay in aanay dhayalsan khatarta dadka Ajanabiga ah ee dalka sharci darada ku soo galaya maalin kasta, ama loo sameeyo sharciyo ay dalka ku joogaan oo lagula xisaabtamo.
Axmed Cali Ubaxle waxa uu tibaaxay in loo baahan yahay number gaar ah oo ay samaystaan ciidamadda amnigu, si buu yidhi marka ay dadka shacabka ahi arkaan wax amaanka khalkhal galinaya ay ula soo socodsiiyaan oo wada shaqayn buuxda u dhexmarto bulshadda iyo shacbiga.
Wasiirkii hore ee warshadda Eng. Axmed Cali waxa kale oo uu si kulul u canbaareeyey hadalkii dhawaan ka soo yeedhay Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow ee uu ku duray xukuumadda madaxwayne Siilaanyo oo uu ku sheegay kooxa Argagixiso ah, waxaanu tilmaamay Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow inaanu hada ahayn boqor balse uu Saxaafadda oo kaliya boqor u yahay oo ay warbaahintu taas u aqoonsan tahay, isla markaana uu yahay shaqsi caadaystay inuu kolba waxa uu doono ku hadlo.
Axmed Cali waxa uu ka digay khatar uu sheegay inay Somaliland kaga iman karto dhinaca Somalia oo uu sheegay inay saamayn yeelan karto dagaalada lagu kala gacanta sareeyo ee Alshabaab iyo dawladda Sh. Shariif iyo Amisom oo isku dhinac ah u dhaxeeya. waxaanu sidoo kale talaabo geesinimo ah ku tilmaamay baaqii xukuumadda Somaliland ka soo saartay Abaaraha iyo dhibaatooyintooyinka ka taagan Somalia.
Wasiirkii hore ee warshadaha Eng. Axmed Cali Ubaxle waxa uu sidaas ku sheegay waraysi khaas ah oo uu Xalay xafiiskiisa magaaladda Hargeysa Wargeyska Haatuf ku siiyey, kaas oo uu kaga hadlay arimo door ah. Ugu horayna isaga oo ka hadlaya arimahaas, waxa uu hadalkiisa ku bilaabay “Ugu horayn ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay Ciid Mubaarik, Ilaahayna sanadkan sanadkiisa ha inagu gaadhsiiyo barwaaqo, badhaadhe iyo Ictiraaf. Mar labaad waxaad dawladda ugu ducaynayaa inay noqoto mid taariikhda Somaliland baal dahab ah ka gasho oo dalka gaadhsiisa horumar wayn oo taariikhdu xusto. Hadaan u soo noqdo su’aasha aad i waydiisay ee heshiiskaas hor dhaca ah ee Shiinaha iyo Somaliland, inkasta oo aanan xukuumadda xil ka haynin ama aan wax Ducument ah aanan ka arag ma jecli inaan dhex dabaasho heshiiskaas la sheegay inuu labada dhinac dhexmaray, markaa adigu waxaan odhan karaa heshiiskaasi waa yididiilo wayn oo shacbiga Somaliland u soo korodhay”.
Axmed Cali Ubaxle mar uu ka hadlayey sida uu u arko in caawimada dadka abaaruhu ku hayaan Somalia loo gaadhsiinayo, waxa uu yidhi “Horta waxa mihiim ah inaynu ogaano inaga Ilaahay inoogu gargaarayo hadii aynu waxa aynu dadka walaalaheen ah ee dhibaataysan aynu ku dhaano aynu tarno. Run ahaantiina baaqa xukuumaddu ka soo saartay abaaraha Somalia-na waxaan u arkaa talaabo taariikhi ah oo loo qaaday dhinaca Binu-aadamnimada, hadaba waa in la is waydiiyo qaabka loo gaadhsiinayo mucaawimadda waa in aanay noqonin qaab qabiil. Waxaan odhan lahaa hay’addaha Samo-falka haloogu hagaajiyo waxa loo ururiyo dadka abaaruhu ku hayaan Somalia ee yaan qaab dawladdeed loo abaarin oo aan loogu gaadhsiinin”.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi “Waxaan qabaa in la inooga baahan yahay inaynu il gaar ah ku hayno waxa ka dhacaya Somalia, isla markaana aynu ka sii arin sano khatar kasta oo ka iman karta Somalia haday noqon lahayd dawladda Sh. Shariif iyo haday noqon lahayd Al-Shabaab-ba. Waxa uu Ilaahay inoogu gargaarayaa inaynu wax kasta oo karaankeena ah aynu u qabano walaalaheena Somalia xataa hadii aanay ina ogolayn dawlad ku sheega Sh. Shariif, taas ayuu Ilaahay Cawil khayr qaba inaga siinayaa hadii aynu nahay reer Somaliland”.
Mar uu ka hadlayey khatarta Somaliland kaga iman karta dhinaca Al-Shabaab, waxa uu yidhi
“Mida kale anigu ma qabo in Al-Shabaab ay ka dhamaatay Somalia, sababta oo ah waxa ay hore ugu hanjabeen inay xeeladahoodii u badali doonaan ku dhufo oo ka dhaqaaq, Ilaahay sharkooda ha inaga hayo kuwaasna ha ka badbaadiyo, intii Lunsana Alle ha soo hadeeyo meelkasta oo ay joogaanba. Waxa inaka inala gudboon inaynu fiiro gaar ah u yeelano arimaha halkaas ka socda, waana in aan dawladda iyo Askarta oo kaliya lagu halayn Amniga.
Xigasho: Wargeyska Haatuf
Previous PostHoggaanka Ku Meel gaadhka ah ee UCID oo mudadii korodhsadayNext PostSomaliland oo 600 oo kun oo Dollar u ururisay Dadka Ku tabaalaysan Abaaraha Soomaaliya	Blog